वागमति प्रदेशमा माधव पक्षले बनायो छुट्टै कमिटि, कोको छानिए पदाधिकारी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more वागमति प्रदेशमा माधव पक्षले बनायो छुट्टै कमिटि, कोको छानिए पदाधिकारी ?
वागमति प्रदेशमा माधव पक्षले बनायो छुट्टै कमिटि, कोको छानिए पदाधिकारी ?
चैत २४ गते, २०७७ - १४:०७
काठमाडौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। नेपाल-खनाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा १७५ सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयकाविरुद्ध समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको खनाल-नेपाल समूहले शाक्य संयोजक रहेको कमिटीलाई आधिकारिक भनेको छ।
यसअघि नेकपा एमाले हुँदाकै कमिटीलाई पूर्णता दिएको उक्त समूहको दाबी छ। खनाल-नेपाल पक्षका नेता अरुण नेपालले भने, ‘हामीले बागमती प्रदेशको आधिकारिक कमिटी बनाएका हौं।’ यसअघि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएको कमिटी विधान विपरीत भएकोले यसअघिकै संयोजकको नेतृत्वमा कमिटी पुनर्गठन गरेको उनको दाबी छ।
जसको सहसंयोजकमा केदार न्यौपाने, अरुण न्यौपाने र पशुपति चौलागाई रहेका छन्। सदस्यमा सदस्यमा पेम्बा तामाङ, टोपबहादुर वाइबा, वसन्त मानन्धर, विष्णु देवकोटा, विष्णु लोहनी, रामप्रसाद अधिकारी, हरि प्रसाद शर्मालगायत रहेका छन्। सचिवमा रचना खड्का रहेकी छन्। समानान्तर कमिटी घोषणा कार्यक्रममा १७५ सदस्यीय कमिटीमध्ये १० जना पछि थप गर्ने जानकारी दिइयो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेसँगै एमालेमा केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्षले समानान्तर ढङ्गले गतिविधि गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएको खनाल नेपाल पक्षले यसअघि नै पार्टी सुदृढिकरण अभियान अन्तरगत तीन महिने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।
चैत २४ गते, २०७७ - १४:०७ मा प्रकाशित